Umlandeli usinde equpheni lomsakazi woKhozi FM emcimbini | News24
Umlandeli usinde equpheni lomsakazi woKhozi FM emcimbini
Durban - Uvuke othulini owesilisa evika isibhakela somsakazi woKhozi FM uNgizwe ‘Zulu Charmer’Mchunu, kubika iphephandaba ILANGA.
Lokhu kwenzeke emcimbini wokuhalalisela emculi kamaskandi uMroza Fakude, obuhlelwe yiMabala Noise, okuyinkampani ephethe uMroza eSibhojeni, KwaHlabisa eMkhanyakude ngoMgqibelo.
Lona wesilisa udonse uNgizwe ngempahla zokugqoka embiza ngamaganyana alumelayo anenhlamba phakathi, wavele wadedela isibhakela uNgizwe esho khona ukuthi abantu bangacabangi ukuthi lapha usemsakazweni.
OLUNYE UDABA: Umphakathi ushise obesolwa ngokudlwengula izingane
Kulo mcimbi obusezansi komuzi kaMroza, bekubekwe ubhazabhaza wetende elimhlophe lomphakathi namabili ezicukuthwane.
Bekuhlatshwe nezinkomo ezingaphezu kwezimbili.